အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက်ပင်ရင်းထောက်ခံချက် | Commerce
Certificate of Origin Rules of Origin
ASEAN Free Trade Area ASEAN Free Trade Area
AISP (Thailand) 682 Items
AISP (Malaysia) 295 Items
AISP (Indonesia) 262 Items
AISP (Brunei) 204 Items
Implementing Guidelines for Partial Cumulation under ASEAN Cumulative Rules of Origin
CEPT Rules of Origin for Textile and Textile Procucts
CEPT Rules of Origin for Wheat Flour
ASEAN - China FTA ASEAN - Korea FTA
SPT 110 Items
ASEAN-China Rules of Origin
ASEAN-China Trade in Good Agreement
ASEAN-China Tariff Reduction Schedule
ASEAN Korea Trade in Goods Agreement
AKFTA PSRs in HS 2017
Korea's Tariff Reduction Schedule under AK FTA
Rules for Preferential Tariffs for LDCs Scheme by Korea (2012)
Preferential Tariff for LDCs Scheme by Korea
Preferential Tariff for LDCs Form
ASEAN - India FTA ASEAN - Australia, Newzealand FTA
ASEAN India Trade in Goods Agreement
India Schedule under AIFTA to CLMV
DFTP Scheme for LDCs by India
ASEAN Australia, Newzealand FTA Agreement
Product Specific Rule (PSR)
Annex 1 - Schedule of Tariff Commitment - Goods
ASEAN - Japan FTA ASEAN - Hong Kong FTA
ASEAN-Hong Kong Form
*လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသအလိုက် သဘောတူညီထားသည့် ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်းနှင့် သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေး ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ*
အာဆီယံဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ယခုထက်ပိုမိုပြီး ကြည့်ရှု့လိုပါက ASEAN Website ဖြစ်သေ ာ*http://www. asean. org/* တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
*ဥရောပသမဂ္ဂသို့ GSP Form A ရယူပြီး တင်ပို့နေသော လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် GSP ဆိုင်ရာ ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်းများ အသေးစိတ် ကြည့်ရှုရန်အတွက် http://ec.europa.eu/taxation _customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_839_en. htm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။*
ဥရောပသမဂ္ဂ၏ GSP အစီအစဉ် ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင် ပို့ကုန်တင်ပို့သူစနစ် (Registered Exporter - REX System) ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
အမိန့်ကြော်စာအမှတ်၊ ၃၂ / ၂၀၁၈
ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ နော်ဝေ၊ ဆွစ်ဇာလန်နှင့် တူရကီနိုင်ငံတို့၏ Generalized System of Preferences (GSP) အစီအစဉ်အရ ပို့ကုန်တင်ပို့သူ မှတ်ပုံ တင်စနစ် (Registered Exporter System) ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ
Guidance on the EU Generalised Scheme of Preferences and its Rules of Origin (English Version) ဥရောပသမဂ္ဂ၏ အထူးအကောက်ခွန်ကင်းလွတ်သက်သာခွင့်စနစ်နှင့် ၎င်း၏ ပင်ရင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ စည်းများအတွက်လမ်းညွှန် (မြန်မာ)
The Registered Exporter (REX) System's User Guide (English) ပို့ကုန်တင်ပို့သူမှတ်ပုံတင်ခြင်းစနစ်အား အသုံးပြုသူများအတွက် လမ်းညွှန်(မြန်မာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံက ပြန်လည်ပေးအပ်သော အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ GSP အစီအစဉ်အရ GSP Form A များကို လျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်းနှင့် US GSP အစီအစဉ်၏ ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်းနှင့် သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမေရိကန်နိုင်ငံက ပြန်လည်ပေးအပ်သော အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ GSP အစီအစဉ်အရ GSP Form A များ ကို လျှောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာချက်
စည်းမျဉ်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အကောက်ခွန်လိုင်းများ
1. US GSP Guidebook 1. US GSP-eligible-for-all-countries-2016
2. US GSP Handbook 2. US GSP-eligible-lines-for-LDBDCs
3.အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ယေဘုယျစည်းဝါးညီ အကောက်ခွန် အစီအစဉ် (၂၀၁၇)
3. US GSP-eligible-Agri-HTS-lines
4. 6. US GSP-eligible-Textile-Apparel-and -Travel-Goods-HTS-lines
ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းလွှာနှင့် ကြေညာချက်များ
ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော ရက်သတ္တပတ်သတင်းလွှာ (၉/၉၈) ASEAN-Korea FTA (CO Form AK)
ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော ရက်သတ္တပတ်သတင်းလွှာ (၃/၂၀၀၇) ASEAN-Japan CEP (CO Form AJ)
ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော ရက်သတ္တပတ်သတင်းလွှာ (၄/၂၀၀၇) ASEAN-India FTA (CO Form DFTP)
ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော ရက်သတ္တပတ်သတင်းလွှာ (၁/၂၀၀၈) ASEAN-Korea FTA (CO Form Korea)
ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော ရက်သတ္တပတ်သတင်းလွှာ (၂/၂၀၀၈) ASEAN-Korea FTA (CO Form Korea) quota free
ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော ရက်သတ္တပတ်သတင်းလွှာ (၃/၂၀၀၈) ATIGA (CO Form D)
ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော ရက်သတ္တပတ်သတင်းလွှာ (၁/၂၀၀၉) ASEAN-India FTA (CO Form AI)
ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော ရက်သတ္တပတ်သတင်းလွှာ (၂/၂၀၀၉) ASEAN-AANZ FTA (CO Form AANZ)
ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော ရက်သတ္တပတ်သတင်းလွှာ (၁/၂၀၁၀) ASEAN-China FTA (CO Form E)